Salady tsaramaso tsotsotra miaraka amin'ny vinaigrette anchovy | ThermoRecipes
Salady tsaramaso miaraka amin'ny vinaigrette anchovy
Hanombohana45 minitraOlona 6180 kaloria
Androany dia manolotra fanombohana miorina amin'ny legum isika: matsiro Salady tsaramaso. Tsy isalasalana fa fomba tsara hitondrana an'ity legume ity amin'ny latabatra amin'ny andro mafana indrindra.
Nametraka roa isika chives voahidy fa azonao soloina tongolo kely. Alohan'ny hidirana amin'izy ireo amin'ny sisa amin'ireo akora dia hanaovantsika karazana tezitra be foana isika haingana, marinating azy ireo amin'ny rano mifangaro sy vinaingitra.
Hametraka voatabia sy oliva mainty ary tany am-boalohany koa isika saosy tery.
1 Salady tsaramaso miaraka amin'ny vinaigrette anchovy
Salady tsara amin'ny fahavaratra izay azo alefa ho toy ny voalohany na ho haingon-trano.
Fotoana hiketrehana: 35M
Ho an'ny chives namboarina:
Rano 75 g
75g vinaingitra fotsy
Chiffre 50 g
Ho an'ny saosy:
Vovon-kazo 6 amin'ny solika (tatatra)
60 g ny menaka oliva virjiny fanampiny
Voasary amin'ny tany
Hazo manitra maina
Tsaramaso am-bifotsy 500 g, efa masaka
Voatabia serizy 5, voadidy
Oliva mainty miloko 10 eo ho eo
Hetezo ho sombina manify ny chives. Atsofohy ao anaty lovia ny rano sy ny vinaingitra, ary koa ireo hazokely voatetika. Avelantsika toy izao izy ireo, ao anatin'io fangaro amin'ny rano sy vinaigitra io, mandritra ny 30 minitra.
Avy eo dia apetratsika ao anaty vera ilay jirofo vita amin'ny tongolo lay, ny trondro, ny menaka oliva, ny dipoavatra ary ny zava-manitra manitra. Izahay dia manao fandaharana 30 segondra, hafainganam-pandeha 4.
Isika manidina ny tsaramaso ary manasa azy ireo amin'ny rano mangatsiaka. Napetrakay tao anaty lovia lehibe izy ireo. Sakanay ny chives (tsy hanampy antsika ilay ranoka) ary apetaka, raraka, amin'ny tsaramaso. Izahay dia manampy ny voatabia sy oliva mainty.
Hosarinay amin'ny saosy daholo ny zava-drehetra ary afangaro tsara.
Izahay dia mitazona ao anaty vata fampangatsiahana mandra-pahatongan'ny fotoanany.
Fanazavana fanampiny - Aubergine namboarina (karazana Almagro)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » General » Salady tsaramaso miaraka amin'ny vinaigrette anchovy
Bacon sy muffins fromazy
Horonana epinara miaraka amin'ny salmona